Wafti Uu Horkacayay Madaxwaynaha DDSI Oo Kaqaybgalaya Sanadguurada 22aad Ee Aas aaska Dhaq-dhaqaaqa Dimuqraadiyada Dadyawga Shucuubta Koonfureed Ee Itoobiya(SEPDM). - Cakaara News
Hawassa(CN) Jimce.Oct.10.2014, Waftigan oo ay ugu horeeyaan madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga ahna afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa shalayto ka anbabaxay magaalada Addis Ababa islamarkaana gaadhay xarunta magaalada Hawassa ee Deegaanka Shucuubta iyo Dadyowga Koonfureed ee Itoobiya.
Waftigan ayaa xalayto ku hoyday magaalada Hawassa ee xarunta deegaanka Shucuubta Koonfureed halkaas oo lagu soo dhaweeyay Hoteelka Haile Resort habeenimadii xalay.
Munaasabadan lagu xusayo aas aaskii ururka SEPDM oo ku midoobay halgankii ay Shuucuubta Koonfureed kaga gudbeen cadaadiskii iyo cabudhintii kaligii talisyadii hore ee dalka soo maray ayaa saaka si toos ah uga bilaabmatay garoonka ciyaaraha ee magaalada Hawassa.
Munaasabad ayaa waxaa kasoo qayb galay Raysalwasaaraha DFI ahna Gudoomiyaha SEPDM mudane Hailemariam Desalegn, R/wasaare kuxigeenka ahna gudoomiye kuxigeenka ururka EPRDF mudane Dhamaqe Makonin, Madaxda ugu saraysa dowlada federaalka iyo dowlad deegaanada, iyo dhamaanba masuuliyiinta kasocota ururada bahwadaagta la ah ururka SEPDM. Waxaana lafilayaa inay kasoo qayb galaan ku dhawaad 80 kun oo marti sharaf ah.
Xuska munaasabadan ayaa qiimo wayn u leh dhamaan qoomiyadaha iyo shucuubta Itoobiya taasoo astaan u ah wada noolaanshaha iyo isjacaylka ummadaha kala diimaha iyo dhaqankaba ah.